15ka Deeqo ee Xanuunada Joogtada ah ee ugu sarreeya Ardayda 2022
Top 15 Deeqaha Cudurka Dabeecadaha ee Ardayda
Boostadani waxay siisaa macluumaad casriyeysan oo ku saabsan deeqda waxbarasho ee joogtada ah ee ardayda doonaya inay sii wataan waxbarashadooda hay'adaha sare. Abaalmarinta lacageed ayaa ka caawin doonta ardaydan dejinta waxbarashada iyo khidmadaha kale.
Waxaa jira qaybo kala duwan oo loogu talagalay deeqaha waxbarasho waxaa jira qaar ka mid ah kuwa gaar ah sida deeqaha loogu talagalay ardayda kansarka, deeqaha loogu talagalay autism, iyo deeqaha kale ee gaarka ah ee cudurada / naafada.
Maqaalkani wuxuu ku saabsan yahay deeqda waxbarasho ee joogtada ah ee ardayda, taas oo ah, kaliya ardayda la nool cudur loo aqoonsaday inuu yahay mid daba-dheeraada ayaa dalban kara deeqdan waxbarasho.
Sidee ku ogaan kartaa cudurada raaga?
Cudur ama jirro waxaa lagu calaamadeeyaa "daba-dheer" markii uu joogto yahay ama muddo-dheer soconayo saamaynteeda ama ay la socoto waqti. "Cudurka daba-dheeraada" waxaa badanaa lagu daaweeyaa cudur soconaya in ka badan saddex bilood. Cudurada joogtada ah ee joogtada ah waa:
Cudurka dabaysha ee joogtada ah
Cilladaha hidaha iyo
Cillad yaraanta difaaca jirka
Kuwani waa cudurrada joogtada ah ee joogtada ah oo haddii aad leedahay mid ka mid ah arrimaha kor ku xusan ee caafimaadka, markaa waad aadi kartaa inaad dalbato deeqda waxbarasho ee hoos ku taxan. Iyo haddii aadan haysan ama qof caafimaad qaba oo dhammaystiran, ka dibna u muuji maqaalkan qof qaraabo ah, saaxiib, ama deris ah oo aad u malaynayso inuu ku xanuunsan yahay mid ka mid ah arrimahaas caafimaad.
Ujeedada qodobkaan ayaa ah in la tuso shakhsiyaadkaan la ildaran cudurada raaga in ay jiraan dad badan oo halkaas jooga oo taageeraya riyadooda waxbarasho iyagoo u siinaya deeq waxbarasho. Aasaasiyadaha samafalka, ururada, iyo shakhsiyaadka deeqsinimada leh ayaa diyaar u ah inay ku dhiirigeliyaan iyaga oo taageeraya himilooyinkooda waxbarasho iyo xirfadeed.
Anaga Baarayaasha Dibadda Dibadda waxaan baarnay deeqahaas waxbarasho sidoo kale oo aan ku fududeyno degelkeena si aan uga dhigno kuwo si fudud u heli kara oo fahmi kara kuwa u baahan. Qaabkaas, waxaan ka heli doonnaa inaan wax ku biirino, taageerno oo aan dhiirrigelino shaqsiyaadkaan la nool hal cudur oo daba dheeraada ama mid kale.
Marka, haddii aad leedahay arrin caafimaad oo daba-dheer oo aad wali rabto inaad ku sii wado hadafyadaada waxbarasho wali waad sameyn kartaa taas, deeqaha waxbarasho ee halkan waxaa si gaar ah loogu talagalay inay taageeraan dadka adiga oo kale ah. Dhammaan deeqaha waxbarasho ee halkan ku yaal waxaa lagu bixiyaa qiime lacageed oo loo isticmaali doono in lagu dheellitiro waxbarashadaada iyo khidmadaha kale.
Anaga oo aan sii dheerayn, aan wax ka baranno deeqdan waxbarasho ee daba dheeraatay iyo sida aad ugu guuleysan karto.
1 Deeqaha Cudurrada daba-dheeraada ee Ardayda
1.1 Deeqda waxbarasho ee Anderson & Stowell
1.2 AbbVie Cystic Fibrosis (CF) Deeqda waxbarasho
1.3 Kansarka deeqda waxbarasho ee Kuleejka
1.4 Sanduuqa Ka-badbaaday Kansarka
1.5 Sanduuqa Cudurka Sickle Cell ee Candice
1.6 Deeqda Aasaasiga Aqoonyahanada Macaanka
1.7 Jack iyo Julie Narcolepsy Deeq waxbarasho
1.8 Ardayda leh deeqda waxbarasho ee Wadnaha
1.9 Tani waa aniga deeqda waxbarasho
1.10 Aasaaska Isbahaysiga Kansarka ee Qaranka (NCCF) Deeqaha Ka-badbaadayaasha
1.12 Talo soo jeedin
Deeqaha Cudurrada daba-dheeraada ee Ardayda
Kuwa soo socda ayaa ah deeqaha waxbarasho ee sida gaarka ah loogu talagalay shakhsiyaadka qaba xaaladaha caafimaad ee daba dheeraada:
Deeqda waxbarasho ee Anderson & Stowell
AbbVie Cystic Fibrosis (CF) Deeqda waxbarasho
Kansarka deeqda waxbarasho ee Kuleejka
Sanduuqa Ka-badbaaday Kansarka
Sanduuqa Cudurka Sickle Cell ee Candice
Deeqda Aasaasiga Aqoonyahanada Macaanka
Jack iyo Julie Narcolepsy Deeq waxbarasho
Ardayda leh deeqda waxbarasho ee Wadnaha
Tani waa aniga deeqda waxbarasho
Aasaaska Isbahaysiga Kansarka ee Qaranka (NCCF) Deeqaha Ka-badbaadayaasha
Tani waa mid ka mid ah deeqda waxbarasho ee joogtada ah ee loogu talagalay ardayda dhigata kuleejka isla markaana ku nool jirro jir ahaaneed, cudur jireed, iyo / ama naafonimo jireed. Codsadeyaashu waa inay iska diiwaangeliyaan barnaamij waqti-buuxa ah ama waqti-dhiman ah oo laga helo kulliyad la aqoonsan yahay waana inaysan ku jirin tijaabada tacliinta.
Caddaynta emaylka ee isqorista Bella Soul, qoraalka looma baahna sidoo kale GPA maahan laakiin waa la tixgelin doonaa. Buuxi magacaaga, sanadkaaga, GPA-ga, jaamacadda, iyo cudurka / khalkhalka iyo email ugu dir sstrader@wisc.edu.
Codsadeyaashu waa inay sidoo kale qoraan labo bog oo sheeko labo waji leh oo ku saabsan kor u kaca iyo hoos u dhaca ku noolaanshaha jirro daba dheeraatay. Qoraalkaaga, ku dar jawaabaha su'aalaha soo socda: “Maxaad talo u sheegi lahayd qof la halgama isla cudur ama cillad? “Maxay yihiin qaar ka mid ah farsamooyinka kaa caawinaya inaad horay u socoto oo aad nolol caafimaad leh u qaadatid maskax ahaan iyo jidh ahaanba?
Deeqda waxaa bixiya Bella Soul, oo ah hay'ad samafal dadweyne oo loo aasaasay inay awood u siiso ardayda wajahaysa jirro joogto ah, naafonimo jireed, iyo cudur iyada oo loo marayo deeqo waxbarasho iyo taageero shucuureed.
Qadarka deeqda waxbarasho waa $ 400 wuxuuna ku egyahay Ogast 30, 2021.
Cystic Fibrosis (CF) waa cudur raaga oo saameeya qanjidhada xabka jirka, qanjidhada dhididka, nidaamka taranka, neefsashada, iyo habdhiska dheefshiidka ee carruurta iyo dadka waaweyn. Maaddaama aan ka wada hadlayno deeqaha waxbarasho ee joogtada ah ee ardayda, tani waa in la sheegaa sidoo kale in laga caawiyo dadka kula nool barashada waxbarashadooda.
AbbVie Inc., oo ah hay'ad samafal ah, ayaa aasaastay barnaamijka 'AbbVie CF Scholarship' barnaamijka si loo caawiyo shakhsiyaadka la halgamaya cudurka iyaga oo siinaya fursad ay ku guuleystaan ​​illaa $ 25,000 si ay u sii wataan tacliinta sare. $ 25,000 deeq waxbarasho ayaa la siiyaa 40 aqoonyahan, taas oo ah, $ 3,000 midkiiba sidoo kale laba aqoonyahan oo kobcaya ayaa la siiyaa deeqo waxbarasho oo dheeraad ah $ 22,000.
Codsaduhu waa inuu ka diiwaangashan yahay shahaadada koowaad ee jaamacadeed ama barnaamijka qalin-jabinta ee hay'ad aqoonsan oo dugsi sare ah oo ku taal Mareykanka waana inuu sidoo kale noqdaa muwaadin ama degane joogto ah. Codsiga waxaa lagu sameeyaa khadka tooska ah ama boostada iyadoo la buuxiyo arjiga oo la soo gudbiyo qormo, liistada guulaha, iyo soo bandhigida hal abuurka.
Xilliga deeqda waxbarasho waa April 30, 2021. Codso hadda
Kansarku waa mid kale oo cabsi leh, cudur raaga oo qaybtan ka dhigaya liiskayaga deeqda waxbarasho ee joogtada ah ee ardayda. Kansarka kuleejka wuxuu caawiyaa kuwa ka badbaaday kansarka inay ku barwaaqoobaan kuleejka iyo wixii ka dambeeya iyaga oo siiya deeqo waxbarasho iyo kaalmo dhaqaale oo kale.
Ardayda hadda la nool kansarka sidoo kale way dalban karaan deeq-lacageedka waxayna codsan karaan hal-mar oo lagu kordhiyo deeqdooda waxbarasho haddii ay la kulmaan arrimo la xiriira caafimaadka oo ku qasbaya inay ka baxaan dugsiga. Abaalmarinta waa $ 5,000 codsadayaashuna waa inay ka diiwaangashan yihiin jaamacad la aqoonsan yahay ama kulliyad si ay u helaan.
Dukumiintiyada kale ee arjiga ayaa ah labadii sano ee ugu dambeysay ee qoraallada tacliinta, xaqiijinta warqadda cudurka, warqad talobixin ah oo ka timid hal qof oo ka baxsan qoyskaaga, iyo labada bog ee ugu horreeya ee soo-celinta canshuurta 2019 ee habboon (tani way is beddeli kartaa sanadka soo socda).
The Cancer for College Scholarship waxaa la bixiyaa sanad walba, haddii aad seegto sanadka hadda jira waad sugi kartaa inaad dalbato sanadka soo socda.
Tani waa deeq waxbarasho kale oo loogu talagalay dadka ka badbaaday kansarka iyo bukaannada kansarka ee hadda aan helin daaweyn. Codsadaha waa in lagu qoraa ama loo aqbalaa isqorista barnaamijka shahaadada koowaad ee dugsiga la aqoonsan yahay.
Qofka qaata deeqda waxbarasho waa inuu soo gudbiyaa nuqul warqad aqbalaad ah oo uu ka helo kuleejka / jaamacada ay doortaan ama warqad wanaagsan oo uu ka helo diiwaan hayaha. Laba waraaqood oo talo bixin ah, ogaanshaha caafimaadka, iyo qormo mowduuca ku saabsan: "Sidee khibradeyda kansarku u saameyn ku yeelatay qiyamkeyga nolosha iyo yoolalka shaqadeyda" waa in la soo gudbiyaa
Qoraalku waa inuu lahaadaa ugu yaraan 500 oo erey iyo ugu badnaan 1200 erey.
Sickle cell waa cillad hidde-wadaha guud ahaan, waa arrin caafimaad oo daba-dheeraatay, waana sababta ay ugu liisgareysay liiskayaga deeqda waxbarasho ee joogtada ah. Deeqdan waxbarasho waxaa la siiyaa saddex jeer ama ka badan sanadkiiba ardayda la ildaran xanuunka sickle cell isla markaana doonaya inay sii wataan waxbarasho sare.
Codsadeyaashu waa inay aqbalaan ama ay ku dhowdahay in laga aqbalo xarun dugsi sare oo la aqoonsan yahay. Kuwa qaata deeqaha waxbarasho waxaa lagu xushay iyadoo lagu saleynayo heerka tacliinta sare iyo ka qeyb qaadashada howlaha manhajka ka baxsan iyo adeegga bulshada.
Laba waraaqood oo tixraac ah ayaa sidoo kale looga baahan yahay arjiga iyo qoraal 250 erey ah oo lagu qoro qaab laba jibbaar ah oo sharraxaya sida sickle cell u saameyn ku yeelatay noloshooda iyo waxbarashadooda, yoolalka waxbarashadooda, sida aad u rajeynayso inaad ku guuleysato, iyo qofka shaqsiyaddiisa ku lahaa. nool yahay si ay uga caawiso inay u adkaystaan.
Halkan ka soo dejiso foomka dalabka.
Sonkorowgu waa jirro joogto ah Hay'ada Culimada Sonkorowga waxay u aragtay inay ku haboon tahay inay siiso deeqo waxbarasho dadka qaba xanuunkaan welina doonaya inay sii wataan waxbarashadooda xarun sare.
Si laguu tixgeliyo deeqdan waxbarasho waa inaad la nooshahay nooca 1aad ee sonkorowga, noqo qof sare oo dugsi sare ah oo doonaya inuu sii wato waxbarashadooda illaa laba ama afar sano oo dugsi sare ah oo la aqoonsan yahay oo ay ka mid yihiin jaamacad, koleej, farsamo, ama dugsi ganacsi.
Kaliya muwaadiniinta Mareykanka iyo deganayaasha joogtada ah ayaa loo oggol yahay inay codsadaan, codsigana waxaa lagu sameeyaa khadka tooska ah halkan. Codsiga wuxuu xirayaa Abriil 6, 2021.
Narcolepsy iyo Idiopathic Hypersomnia waa cilado daba dheeraada oo la xiriira hurdada sidoo kale waa cillad aad u yar. Deeqda waxbarasho ee Jack iyo Julie Narcolepsy waxay socotaa sanad walba toddobadii sano ee la soo dhaafay tanina waa sanad kale oo aad adigu codsato oo aad ku guuleysato deeqda waxbarasho.
Deeqdani waxay abaalmarin u siineysaa $ 1,000 ardayda 25 ee laga helay cudurka Narcolepsy ama Idiopathic Hypersomnia oo qorsheynaya inay dhigtaan kuleejo ama jaamacad afar sano ah. Marka, waqtiga arjiga, waxaad noqon doontaa sarkaal sare oo dugsi sare ah gudaha Mareykanka.
Dukumiintiyada kale ee looga baahan yahay dalabka waa:
Qormo ka kooban 500 illaa 1000 erey oo mowduuca ku saabsan: “Haddii aad dib ugu laaban lahayd waqtiga oo aad la hadli lahayd naftaada maalinta lagu ogaado, maxaad dhihi lahayd? Maxaa talo ama aragti ah oo aad la wadaagi laheyd naftaada yar?
Liiska dhammaan waxqabadyadaada manhajka ka baxsan
Waraaqaha rasmiga ah ee fasalada simistarka dhowaan la soo gabagabeeyay
Natiijooyinka imtixaanka ACT ama SAT
Warbixin xaqiijin baaris cudur oo la saxiixay oo ka timid dhakhtarka neerfaha ee la aqoonsan yahay
Sawir sawir ah.
Tani waa mid ka mid ah deeqda waxbarasho ee joogtada ah ee ardayda la ildaran cudurrada wadnaha. Deeqdan ayaa la bixiyaa sanadkiiba haddii qofka qaataha ah uu ilaaliyo shuruudaha lagama maarmaanka ah waa la cusbooneysiin karaa sanadkiiba sidoo kale.
Codsadeyaashu waa inay hadda iska diiwaangaliyaan ama ay kujiraan diiwaangelinta jaamacad la aqoonsan yahay ama kuleej si ay u sii wataan barnaamijka shahaadada koowaad ama qalin-jabinta. Haddii aad tahay kan dambe, waa inaad bixisaa warqad aqbalaad ah, jadwal rasmi ah oo simistarkooda koowaad, iyo qoraallada dugsiga sare.
Codsadeyaashu waa inay lahaadaan CGPA ee 3.0, baaritaanka xaadirka ah ee arrimaha wadnaha ee ka socda dhakhtarka shatiyeysan, warqad talobixin ah, bayaan shaqsiyeed oo aan ka badnayn ereyada 2,000, iyo in ka yar 500 oo erey oo sharraxaya caqabadihii aad ka gudubtay isagoo leh arrimaha wadnaha.
Codsiga wuxuu u furan yahay oo keliya muwaadiniinta Mareykanka, muwaadiniinta, iyo deganayaasha joogtada ah.
Tani waa mid ka mid ah deeqda waxbarasho ee joogtada ah ee ardayda hadda la il daran ama ka soo kabsaday Alopecia. Codsadeyaashu waa inay sidoo kale noqdaan waayeelka dugsiga sare sannadaha ugu dambeeya waxayna rabaan inay ku sii wataan waxbarasho sare machad la aqoonsan yahay oo ku yaal Mareykanka.
Intaa waxaa sii dheer, codsadayaashu waa inay soo gudbiyaan waxyaabaha soo socda oo qayb ka ah dalabka deeqda waxbarasho:
Qoraal shaqsiyeed oo sharaxaya khibradaada adoo leh alopecia, looma baahna ugu badnaan ama ugu yaraan ereyo.
Resume noloshaada / iskuulkaaga iyo khibradaada shaqo
Warqad talo bixin ah oo ka socota dugsiga, shaqada, ama kafaalaqaadaha bulshada
Warqad aqbalid hay'ad sare
NCCF waxaa loo sameeyay inay taageerto oo ay adeegyo u fidiso dhallinta yar yar ee noloshooda ay saameysay kansarka isla markaana ku sii wata waxbarashadooda daaweyn ama daaweynta ka dib. Deeqdani waa abaalmarin $ 1,000 ah oo loo adeegsado in lagu dheellitiro waxbarashadda qofka qaata iyo khidmadaha kale.
Si aad ugu guuleysato abaalmarinta, waa inaad buuxisaa shuruudaha soo socda:
Codsaduhu waa inuu noqdaa ka badbaaday kansarka ama bukaanka hadda jira.
Da'da loo baahan yahay waa 18-35 sano laakiin marka laga reebo ayaa la sameyn doonaa haddii aad tahay 17 sano jir oo aad gasho kulliyad deyrta ka dib arjiga
Waa inuu noqdaa muwaadin ama degane rasmi ah oo Mareykan ah
Isqorista ama qorsheynaya in lagu qoro kulliyad la aqoonsan yahay, jaamacad, ama machad farsamo si loo sii wado shahaadada koowaad ee jaamacadeed ama shahaadada qalinjabinta ama shahaado.
Codsadaha waxaa lagu qiimeyn doonaa iyadoo lagu saleynayo tayada qoraalka, baahida dhaqaale, sheekada guud ee ka badbaaday kansarka, u heellanaanta waxbarashada, tayada talooyinka, iyo soo bandhigida a "Will Win" dabeecadda la xiriirta khibradaada kansarka.
Tani waxay soo afjartay maqaalkan ku saabsan deeqaha waxbarasho ee joogtada ah ee ardayda, u gudub shuruudaha deeqda waxbarasho iyo shuruudaha u-qalmitaanka si taxaddar leh looga fogaado khaladaadka. Waad sii wadan kartaa inaad dalbato in ka badan laba ka mid ah deeqaha waxbarasho ee halkan ku taxan si aad u kordhiso fursadahaaga ku guuleysiga ugu yaraan mid ka mid ah deeqaha waxbarasho.
Codso waqti hore si markaa dalabkaaga sidoo kale dib loogu noqdo goor hore oo haddii ay dhacdo uusan shaqeynayn waxaad dalban kartaa mid kale.
Intaa waxaa sii dheer, waad dalban kartaa deeqaha waxbarasho ee caadiga ah iyo sidoo kale inaad sii kordhiso fursadahaaga ku guuleysiga deeqda waxbarasho. Waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah deeqdan waxbarasho qaybta talo soo jeedinta ee hoose:
Deeqaha Naafada ee Bulshada - Shuruudaha, Codsiga, iyo Faahfaahinta
Top 8 Ehlers Danlos Syndrome Deeqaha
Top 11 Deeqaha Cudurka Maskaxda
13 Deeqo waxbarasho oo loogu talagalay ardayda qaba Autism
9 Deeqaha Sare ee Katooliga Sare ee Ardayda
U-qalmitaanka deeqda waxbarasho ee UNICAF, Shuruudaha, iyo Codsiga
Deeq waxbarasho oo diblooma ah Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo Ka hooseeya Deeqaha waxbarasho
deeqaha jirada ee ardayda
Previous Post:Koorsooyinka 21-aad ee ugu Sarreeya iyo Dugsiyada ku yaal Dubai oo wata Shahaado
Post Next:13ka Deeqo ee ugu sareeya Ardayda Soo Noqota
Pingback: Codsiga Deeqda -waxbarasho ee Sare ee UniAcco Fly 2022
Pingback: 10 Dugsiyada Kalkaalinta Caafimaadka ee ugu Fiican Houston Texas